Mogadishu Journal » 2018 » September » 30
Dowladda “Waala gaaray waqtigii Farmaajo uu ka degi lahaa Hargeysa”
Mjournal :-Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in dardar iyo juhdiba la geliyo sidii dib loogu bilaabi lahaa wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland oo istaagay. Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaliya Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa sheegay in...
Mjournal :-Ugu yaraan 832 qof ayaa ku dhimatay dhul gariirka iyo dufaanta Tsunami ee sida wayn ugu dhuftay jasiiradda Sulawesi ee dalka Indonesia, sida ay sheegtay laanta ka hortagga masiibooyinka dalkaasi. Waxay sidoo kale sheegtay in dadka ay saamaynta ku reebeen dhul gariirka...
Wargeska The Sun ayaa siweyn isugu hawlay inuu ogaado waxa ka socdo garoonka Old Trafford madaama macalin Jose Mourinho mustaqblkiisa Man United dood ka taagan tahay. Cayaartooyda kooxda Man United iyo dhamaan shaqaalaha kale ee kooxda ayaa isku raacsan in macalin Jose Mourinho...
Mjournal :-Ganacsatada ku ganacsan jirtay suuqa kalluunka degmada C/casiis ee gobolka Banaadir ayaa maanta waxa ay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho ka dhigayaan banaanbax cabasho ah. Banaanbaxan ayaa wuxuu ka dambeeyay kadib markii ganacsatadan loo diiday inay ku ganacsadaan...
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaasi kooxo hubeysan ay ku dileen Haweenay ka mid aheyd dadka Magaalada Gaalkacyo. Dilka haweeneyda ayaa loo adeegsaday Toorey sidda ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah...
Kampala- Prime Minister Ruhakana Rugunda on Thursday warned world leaders gathered for the 73rd session of the UN General Assembly (UNGA) in New York that any reduction of peacekeeping troops in Somalia should match the strengthening of the country’s security forces. In a speech...
Mjournal :-Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo booqashada rasmiga uu ku marayey dalka Jarmalka ku soo afmeeray xarig ka jaridda mid ka mid ah masaajidda ugu weyn qaaradda Yurub oo laga dhisay dalka Jarmalka Wuxuu Madaweyne Erdogan sheegay masaajidkan laga dhisay...
Mjournal :-Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo Khudbad ka jeeiyay Shirka golaha guud ee QM ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay tilaabo muhiim u qaaday dhinaca la dagaalanka Al-shabaab, wuxuuna ugu baaqay Madaxda Dunida in Soomaaliya laga qaado...